Olee otú mbubata MKV ka Final Cut Pro on Mac (Mavericks gụnyere)
> Resource> tọghata> Olee mbubata MKV ka Final Cut Pro on Mac (Yosemite gụnyere)
Wanna mbubata MKV faịlụ ka Final Cut Pro maka edezi ma FCP ọ dịghị ka ị na-eme ya? Ọfọn, Final Cut Pro bụ a na-ewu ewu video nchịkọta akụkọ nke ọwụwa Mac ọrụ. Na-emeghe MKV faịlụ na-eji ọzọ mgbe site video edezi ọkachamara obibi na FCP na amu amu video editọ. Otú ọ dị, MKV akwadoghi FCP, otú ị pụrụ bụghị mbubata MKV ka Final Cut Pro ozugbo. N'ebe a, anyị ga-ewebata ihe dị mfe na-eji na ọkachamara MKV ka FCP Ntụgharị maka Mac-enyere gị aka dozie nsogbu.
Nke a na usoro solves nsogbu nke ma importing HD MKV (H.264) faịlụ na SD MKV faịlụ ka Final Cut Pro site n'ịtụgharị MKV faịlụ ka FCP akwado MOV na MP4 magburu onwe video àgwà na-eju akakabarede ọsọ. Ya ugbu a na tọghata MKV ka FCP n'ime clicks!
Free download MKV ka FCP Ntụgharị maka Mac:
Olee otú iji tọghata MKV ka Final Cut Pro on Mac nzọụkwụ site nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1. Add MKV faịlụ
Pịa File Tinye Media Files bọtịnụ ma ọ bụ Dọrọ na dobe ịgbakwunye .mkv faịlụ site na kọmputa gị. Ị nwere ike tinye ọtụtụ faịlụ na tọghata ha otu mgbe.
Nzọụkwụ 2. Họrọ mmepụta format dị ka Final Cut Pro
Pịa abụọ elu-akụ na ala nke a usoro si ebi ndụ na mgbe ahụ họrọ Final Cut Pro dị ka mmepụta format n'okpuru edezi taabụ iji na-enweta kachasị videos maka FCP.
Nzọụkwụ 3. Malite iji tọghata ikpeazụ ịkpụ MKV on Mac (Mountain odum gụnyere)
Pịa Malite na-amalite ikpeazụ ịkpụ MKV faịlụ akakabarede. I nwekwara ike dezie videos na wuru na-video nchịkọta akụkọ a na Mac MKV ka FCP Ntụgharị.
Mgbe akakabarede, ị nwere ike mbubata converted video faịlụ ka Final Cut Pro X mfe. Ekele!
Ihe Ọmụma nkekọrịta: banyere MKV format
The MKV (Matroska video) bụ onye na-emeghe ọkọlọtọ free akpa format, a faịlụ Ọkpụkpọ na nwere ike ijide na-akparaghị ókè ọnụ ọgụgụ nke video, audio, foto ma ọ bụ sobtaitel tracks n'ime otu faịlụ. Ezubere ya ije ozi dị ka a eluigwe na ala format maka na ịchekwa nkịtị multimedia ọdịnaya, dị ka fim ma ọ bụ TV na-egosi. MKV yiri na tụụrụ ime ọzọ containers dị ka AVI, MP4 ma ọ bụ ASF, ma bụ kpamkpam na-emeghe na nkọwapụta, na implementations esịnede ukwuu n'ime ha nke na-emeghe isi software. Matroska faịlụ na ụdị na-.MKV maka video (na ndepụta okwu na ọdịyo), .mka maka audio-na-faịlụ na .mks maka ndepụta okwu naanị. Kasị nkịtị ojiji nke .mkv faịlụ bụ na-echekwa HD video faịlụ.
Olee otú Tinye, Dezie AVI Metadata maka Windows / Mac (Yosemite gụnyere)
SWF Ntụgharị: Olee otú iji tọghata ihe ọ Video ka SWF File